ရဲဘော်မသေ - Myanmar Young Crusaders
စာအုပ်အမည်ကတော့ NEVER SAY DIE ပါပဲ။ ဆရာဒေဗစ်ရိုးမို (၁၉၄၄ - ၂၀၀၃) ရဲ့ အထ္ထုပ္ပတိ စာအုပ်လေးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက ၀ိုင်စီလို့ခေါ်တဲ့ Myanmar Young Crusaders တည်ထောင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Douglas Hsu အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးက ရေးသားပြီး ANM, Advancing Native Mission http://www.adnamis.org မှ ထုတ်ဝေပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်စာမှာ သူရဲ့အနားမှာ ၁၀နှစ်ကျောင် သစ္စာရှိစွာနဲ့ စာရေးသူအပေါ် နာလည်တဲ့ ဇနီးသည် Douglas Hsu ကို အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ လူမျိုးသမီးအများတို့သည် ကောင်းမွန်စွာပြုကြပြီ။ သို့ရာတွင်၊ သင်သည် ထိုသူအပေါင်းတို့ကို လွန်ကဲသည်ဟု သူ့ကိုချီးမွမ်းတတ်၏။ သူတ္တံ ၃၁း၂၉ .
Read more: ရဲဘော်မသေ - Myanmar Young Crusaders
အလွန်ှရှည်သောစိတ်၊ နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်၊ ပြောကြားရန် - ဆရာဦးအုန်းမြင့်
ဆရာဦးအုန်းမြင့် The Navigator
ဘန်ကောက် MCA Church June 2012 ဒေသနာ (အကျဉ်းချုပ်)
၂တိ၎း၁-၅ အလွန်ှရှည်သောစိတ်၊ နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်၊ ပြောကြားရန်ကျမ်းပိုဒ် ကို ဖတ်ပြီး ယခုဟောပြောချက်များ ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေမည့်အရာများဖြစ်စေရန် ဆုတောင်းခြင်း ဖြင့် စတင်ပါသည်။
Read more: အလွန်ှရှည်သောစိတ်၊ နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်၊...
အသင်းတော်တည်ဆောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဆောက်အဦးမဟုတ်ပါ။ သင်းထောက်များနှင့်အသင်းသားများ ဒေါင်ဒေါင်မည်ပြီး Church & Cell Group များတွင် ကျမ်းစာပို့ချနိုင်ရမည်။ တရားဟော၊ဆုတောင်းနိုင်ရမည်။ ပုံသက်သေကောင်းပြရမည်။ အသင်းတော်မှ ခွဲခွာချိန်တွင်လည်း မိတ်သဟာရအသစ် တည်ဆောက်နိုင်စွမ်းရှိအောင်၊
Read more: အသင်းတော်အဆောက်အဦးအတွက် ဆုတောင်းချက်ပြည့်ဝခြင်း
ကချင် KIA နဲ့ မြန်မာစစ်တပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန် July 2011 မြစ်ကြီးနား မိဘများထံ ရောက်သွားပါတယ်။ ကချင်လူမျိုးများဟာ ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး ခရစ်ယာန်များဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် လောကအရာများဖြစ်တဲ့၊ ရာထူး၊ ငွေ၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးများနောက် လိုက်ပါသွားရင် သာမန်ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ဟာ
Read more: သြဇိမင်းက ကွယ်နေတာမျိုး၊ လောကအရာ တောင်ကြီးများ...
လန်ဒန်ခရီးစဉ် တရားဒေသနာ - ဆရာကြီး ဦးတင်မောင်ထွန်း (ရန်ကုန်မြို့)။
ဒီကနေ့က ကျွန်တော်တို့ ဘုရားသခင်ရဲ့ နေ့တော်လို့ခေါ်တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့၊ ရှင်ပြန်ထမြောက် ရာနေ့ လို့ ခေါ်တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့။ အဲဒီ ခွန်နှစ် ရက်မှာ ပထမရက်လို့ခေါ်တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့၊ အပါတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့ တော့ ကျတာပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအပါတ်တော့ ပို၍ မင်္ဂလာရှိတယ်။ ထူး ကဲသော မင်္ဂလာ တပါးနဲ့ ဆင်ချင် စရာဖြစ်တဲ့ ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်။ ဘာကြောင့်လို့လဲ ဆိုတော့ သမ္မာကျမ်း စာနေ့တဲ့။ သမ္မာကျမ်းစာ တယ်ပြီးတော့ အံ့သြစရာကောင်းပါတယ် နော်။ ဘာကြောင့်လဲ၊ သမ္မာကျမ်းစာ ဘာကြောင့်အံ့သြစရာ ကောင်း သလဲဆိုတော့ သမ္မာကျမ်းစာကို နှုတ် ထွက်တာက ထာဝရ ဘုရားသခင် ဖြစ်တယ်။ ထာဝရဘုရားသခင်က သမ္မာကျမ်းစာကိုနှူတ် ထွက် တဲ့ အတွက်မှန်ရမယ်။ ဘုရားဆိုတာက လှည့်စားခြင်းမရှိဘူး။ မုသာ မရှိဘူး။ တခိုးဟာ အာဏာဟာ ဘယ်တော့မှနည်းမသွားပါဘူး။ ကျွန် တော် တို့ သိရပါတယ်။ အဲဒါကို တရားသိတဲ့ လူတွေ၊ စာတတ်တဲ့လူတွေ မဟုတ်၊ လူဖြစ်ရင်သိတာဘဲ။ အံ့သြ စရာနော်။ တောကြီးတွေ၊တောင်ကြီး တွေမှာ အင်မတန်ရိုင်းတဲ့လူတွေလည်း ဘုရားဆိုတာတော့ သူတို့ သိတယ်။ အတွင်းအာရုံကနေ သိတယ်။ ကျောက်တုံး ကြီး နဲ့ပေါ်တာရှိသလို၊ သစ်ပင်ကြီးနဲ့ ပေါ်တာ ရှိတယ်။ ရေတခွန်ကြီးနဲ့ပေါ်တာ ရှိတယ်။ အတွင်းသက်သေလို့ ခေါ်ပါတယ်။
Read more: လန်ဒန်ခရီးစဉ် တရားဒေသနာ - ဆရာကြီး...
The Gril with the Green Tattoo ! အစိမ်းရောင် Tattoo ရှင် မိန်းခလေး
မကြာသေးခင်က ကြည့်လိုက်ရတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ The Girl with the Dragon Tattoo ပါပဲ။ မင်းသမီးရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာ Tattoo ထိုးထားမယ်ဆိုတာ ဇာတ်ကားနာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့ သိနိုင်ပေမယ့် အဲ့ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ မင်းသမီးက သူ့ကိုအနိုင်ကျင့်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ လူယုတ်မာကြီးရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာ Tettoo တွေပြန်ထိုးပြီး
Read more: The Gril with the Green Tattoo ! အစိမ်းရောင်...
ကင်ဗက်ခရူးဆိတ်၊ခရစ်တော်သံအမတ်များ - ပေါလ်ခေကျိုင်း (Rev, Th.D)
ပေါလ်ခေကျိုင်း (Rev, Dr Paul Khay Kyaing)
ငယ်စဉ် အမွှာမွေးရာ၊ အမဖြစ်သူ အသက်ရှင်ပြီး၊ နောက်မှမွေးသည့် သူအသက်မရှိတော့။ ထုပ်ပိုး၊သဂြိုလ်ရန်အချိန်တွင် ဓမ္မဆရာတဦးရောက်လာပြီး၊ ရေနွေး၊ရေပတ်တိုက်၊ လေမှုတ်၊ ဆုတောင်းပေးခြင်းဖြင့် အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့သော ကျွန်တော်ဖြစ်သည်။ ချင်းတောင်တွင်
Read more: ကင်ဗက်ခရူးဆိတ်၊ခရစ်တော်သံအမတ်များ -...
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်သောသူများသည် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ကိန်းဂဏန်းအရ အများဆုံးဟု သိရှိရပါသည်။ သို့သော် ဤမျှလောက်များပြားလှသော ကိန်းဂဏန်းများအနက် အရေအတွက် မည်မျှဘုရားသခင်အား အမှန်တကယ်ချစ်၍ မိမိတို့၏
Read more: အလုံးစုံဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းမှသည်...
Obey to Lord, နာမည်ကျော် ဓါတ်ပုံတပုံပါ။
Monday, 15 June 2009 20:28 Zaw Aung Spritual
ဘုရားဖြစ်ကြောင်းသက်သေ နှင့် ဘုရားထံနာခံခြင်း
အင်အားကြီးမားတဲ့ ခွေးဘလူးကြီးများကြားမှာ သတ္တိရှိစွာ အမြှီးထောင်၊အသေခံ လမ်းလျှောက်ရဲတဲ့ ကြောင်တကောင်ရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုဖေါ်ပြတဲ့ပုံပါ။ ကြောင်ရဲ့ယုံကြည်မှုအားကြီးခြင်းကို
Read more: Obey to Lord, နာမည်ကျော် ဓါတ်ပုံတပုံပါ။
ခွင့် လွှတ် ခြင်း ၏ အံ့ ဘွယ် တန် ခိုး
Saturday, 17 October 2009 09:01 administrator Spritual
Lewis Grizzard သည် ငယ် ရွယ် စဉ် ဘ ၀ က ဂျော် ဂျီ ယာ ရှိ မက် သ ဒစ် ဘု ရား ကျောင်း ငယ် တွင် ကြီး ပြင်း လာ ရ သည့် ဘ ၀ အ ကြောင်း ကို အ မြဲ တ စေ ရေး သား တတ် ပြီး၊ ထို အ ချိန် ကာ လ များ သည် တန် ဖိုး ရှိ သော သူ ၏ ငယ် ရွယ် စဉ် က လေး ဘ ၀ ဖြစ်
Read more: ခွင့် လွှတ် ခြင်း ၏ အံ့ ဘွယ် တန် ခိုး
ခဏလောက် ဆုတောင်းကြပါစို့။ ကျေးဇူးရှင်ထာဝရမြက်စွာဘုရားသခင် .. ကိုယ်တော်ရှင်သည် ကြီးမြတ်ပါ၏။ ဒီညနေ ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော် အနည်းငယ်ကိုလည်း
Read more: ခရစ်ယန်အိမ်ထောင် - ဆရာဂျက်ဖရီ
ယေရုဆလင်မြို အဖြစ်ပျက်နှင့်စာလျှင် ဘာမှ မဖြစ်လောက်သေးပါ။
ဆရာ. Lagwi Bawm Luk နှင် ဆရာမြင့်စိုး (BCFF, Daly City, 14-Sep-2008)
ယေရမိ မြည်တမ်း ၃း ၂၁ -၂၅ "ထိုသို့ အကျွနိုပ်တို့ စိတ်နှလုံးသည် ဆင်ခြင်၍ သတိရသောအခါ
မျှော်လင့်စရာ အခွင့်ရှိပါသည်" ယေရုဆလင်မြို့ကို ဖျက်ဆီးခံရသောအခါ ပရောဖက်ကြီး ယေရမိ
Read more: ယေရုဆလင်မြို အဖြစ်ပျက်နှင့်စာလျှင် ဘာမှ...